DEG DEG+XOG: M/weynaha Galmudug oo diiday dalab uga yimi RW Kheyre, muxuuse ku saabsanaa? – Puntlandtimes
DEG DEG+XOG: M/weynaha Galmudug oo diiday dalab uga yimi RW Kheyre, muxuuse ku saabsanaa?
May 12, 2018 W LAASCAANO
MUQDISHO(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in uu jiray kulan gaar ah oo dhexmaray Ra`iisulwasaaraha dawladda Faderaalka Xasan Cali Kheyre & Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf, kaas oo intiisa badan looga hadlay arrimaha siyaasada ee hadda ka dhex jira dawlad gobaleedyada iyo dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Kulankan oo ka dhacay Aqalka gaarka ah ee Ra`iisulwasaaraha Jimcihii shalay ayaa diiradda lagu saaray sidii Galmudug aysan qeyb uga noqon laheyn arrimaha shirka Baydhabo ayna ka baaqsato, kaas oo ay xasaasiyad weyn ka qabto dawladda Faderaalka.
Saraakiil ku dhaw dhaw Madaxweynaha Galmudug ayaa u sheegay Puntlandtimes.com in aan waxba horumar ah laga gaarin, ka dib markii ay dhinacyadu aad iskugu fahmi waayeen dooda Ra`iisulwasaaruhu watay.
Mr, Xaaf ayaa diiday in uu ka baaqsado Shirka Baydhabo, wuxuuna si aan gabasho laheyn u sheegay in shirkaas uu yahay mid ay gaar u leeyihiin dawlad gobaleedyada dalku, loogana hadlayo oo kaliya sidii Soomaalidu ay iskugu tashan lahayd horumarna loo gaari lahaa.
Madaxweynaha Galmudug ayaa u soo jeediyey Xukuumadda Faderaalka in aysan shareysan kulamadan oo dhamaantood uun yoolka laga leeyahay tahay sidii Soomaalidu ay taladeeda u mideysan lahayd, loogana maarmi lahaa in gacmaha Shisheeye ay noqdaan kuwa xalka kama dambeysta ah qaada.
Natiijo la’aanta shirkan ayaa ka dhigan guuldarro siyaasadeed oo dhabarka uga dhacday Xukuumadda Faderaalka oo saacadihii ugu dambeeyey dagaal adag ugu jirtay sidii ay u kala dhantaali lahayd shirka Madasha Wadatashiga ee dawlad gobaleedyada xubnaha ka ah dawladda Faderaalka, kaas oo ka dhacaya magaalada Baydhabo.
Xariirka u dhaxeeya dawlad gobaleedyada & Dawladda Faderaalka ayaa hadda u muuqday mid markale ay caqabad ku timi, waxaana dhawaan baaqday shir ay labada dhinacba ku wada yeelan lahaayeen magaalada Baydhabo, ka dib markii Madaxtooyada Soomaaliya ay dhexda u gashay khal-khal siyaasaded oo ku yimi baarlamaanka Faderaalka, ugu dambeyn-na kalifay in guddoon cusub la doorto.